एटलेटिकोका लागि मोराटाको दुई गोल- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
असार २०, २०७७ रोयटर्स
म्याड्रिड — एटलेटिको म्याड्रिडले स्पेनी ला लिगाको तेस्रो स्थानमा शुक्रबार आफ्नो पकड अझ मजबुत बनाएको छ । यसका लागि उसले अल्भारो मोराटाको दुई गोलमा रेलिगेसनबाट बच्न संघर्षरत मार्लोकालाई ३–० ले हरायो ।
एटलेटिकाको तेस्रो गोल कोकेको नाममा रह्यो । यो जितपछि उसको ३४ खेलबाट ६२ अंक भएको छ । यो चौथो स्थानमा रहेको सेभियाको भन्दा पाँच अंक बढी हो ।
हारले मार्लोकाको रेलिगेसनबाट बच्ने सम्भावना कम कमजोर भएको छ । उसको ३४ खेलबाट २९ अंक छ र पुछारबाट तेस्रो स्थानमा छ । यो १७ औं स्थानमा रहेको सेल्टा भिगोभन्दा पाँच अंकले पछाडि हो ।
प्रकाशित : असार २०, २०७७ ०८:०६
बाबुले नै शिशु अर्कैलाई दिएपछि...
नि:सन्तान महिलाले अवैध ढंगले शिशु लिएको खुलासा
नवजात शिशु कसरी आमाको काखबाट खोसिइन् र आफ्नै बाबुले किन अर्काको जिम्मा लगाए ?
असार २०, २०७७ जनकराज सापकोटा
काठमाडौँ — राजधानीमा कारोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेका बेला असार ८ गते भृकुटीमण्डपबाट एउटा सरकारी गाडी निस्कियो । उक्त गाडीमा सवार प्रहरी जवान शर्मिला दाहालले झन्डै साढे चारमहिने शिशुलाई जतनले काखमा लिएकी थिइन् ।
असई नारायण केसी पनि त्यही गाडीमा थिए । बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रमा कार्यरत यी दुई प्रहरी शिशुलाई बोकेर झापाको दमक जाँदै थिए । जसका पछाडि जोडिएको घटनाले शिशुको अवैध ओसारपसार र त्यसको जालोका बारेमा मात्रै बुझाउँदैन, नि:सन्तान दम्पतीले शिशु प्राप्तिका निम्ति कस्तो जोखिम उठाउन बाध्य छन् भन्ने देखाउँछ ।
उद्धारमा गएका कर्मचारी र प्रहरी देखेपछि ती महिलाले भनेको उद्धृत गर्दै एक कर्मचारीले सुनाए, ‘हामीलाई देख्नेबित्तिकै उनी निकै डराइन् र भनिन्, ‘बच्चा लैजाने हो भने त म मरे नि भैगयो नि !’ ती कर्मचारीका अनुसार महिलाले स्थानीय र आफन्तलाई आफैं गर्भवती भएर, धरान पुगेका बेला उतै बच्चा जन्माएको बताएकी रहिछन् ।
यतिबेला दमक नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको सेफ हाउसमा बालिकाको जन्म दिएको भनिएकी आमा, बालिका लिने काठमाडौंकी महिला र शिशुलाई सँगै राखिएको छ । फागुन २८ गते जन्मेकी शिशु अहिले झन्डै चार महिना पुगिसकिन् । कोरोना संक्रमणको तीव्र रफ्तारसँगै उनीसँगै जोडिएर विकास भइरहेका अनेकन् घटनाक्रमबारे उनलाई के थाहा ! सेफ हाउसका एक कर्मचारीले शिशु दुवै महिलासँग नजिकिएको सुनाए । ती कर्मचारीले भने, ‘अस्पतालमा जन्माउने आमा र काठमाडौंमा पाल्ने आमा दुवै उनका निम्ति बराबर जस्तै देखिन्छन् ।’
प्रकाशित : असार २०, २०७७ ०८:०३